ကလေးမြို့အတွင်း တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးများ ဆောင်ရွက်ရန် ကလေးရဲတပ်ဖွဲ့ စတင်ဖွဲ့စည်း - Myanmar Pressphoto Agency
ကလေးမြို့အတွင်း တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးများ ဆောင်ရွက်ရန် ကလေးရဲတပ်ဖွဲ့ စတင်ဖွဲ့စည်း
MPA December 7, 2021 1 min read
စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ကလေးမြို့နယ်အတွင်းတွင် တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် CDM ရဲများ ဖြင့် Kalay Police Service အဖွဲ့ကို ဒီဇင်ဘာလ၆ရက်နေ့တွင် စတင် ဖွဲ့စည်းလိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ကလေး ပြည်သူ့ ကာကွယ်ရေး အဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်းပြီး CDM ရဲများက ဒေသခံလူငယ်များကို ရဲလုပ်ငန်းဆိုင်ရာများ သင်ကြား ပေးနေပြီး ဒေသတွင်းအုပ်ချုပ်ရေးနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို တာ၀န်ယူမှု၊ တာ၀န်ခံမှု ရှိရှိ ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း Kalay Police Serviceက မှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ တစ်ဦးက MPA သို့ ပြောသည်။
“ယနေ့က စပြီး အသက်၀င်ပါပြီ။ ပြည်သူလူထုရဲ့ တိုင်ကြားမှုများကိုတော့ နောက် ၂ ပတ်အတွင်းလောက် လက်ခံနိုင်အောင် ကြိုးစားမှာပါဗျ။ လက်ရှိကတော့ စည်းရုံးရေးကာလပါဗျ” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
ကလေး ရဲတပ်ဖွဲ့အနေဖြင့် အများပြည်သူလက်ခံသည့် ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဩဇာကြီးမားသူများနှင့်ပူးပေါင်းပြီး တရားစီရင်နိုင်ရေးအတွက်ပါ ကြိုးပမ်းမှုများ ရှိနေကြောင်း သိရသည်။
ပြည်သူလူထုအတွက် တာ၀န်ယူမှု၊ တာ၀န်ခံမှု၊ လွတ်လပ်မှု၊ တရားမျှတမှု၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုတို့အတွက် ဆောင် ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်းလည်း ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ဩဂုတ်လအတွင်းကလည်း ကရင်နီပြည်အတိုင်ပင်ခံကောင်စီ (KSCC)က ကရင်ပြည်နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့သေးသည်။
လက်ရှိအချိန်တွင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နှင့် ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်များအကြား နေရာ အနှံ့ အပြားတွင် တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေသော်လည်း ဒေသခံကာကွယ်ရေး တပ်မများအနေဖြင့်လည်း နယ်မြေ စိုးမိုး မှုများ ရှိလာသည် တွေ့ရသည်။
လက်ရှိအချိန်တွင် စစ်ကိုင်းတိုင်းအတွင်း၌ ဒေသခံကာကွယ်ရေးအဖွဲ့များအနေဖြင့် စစ်တပ်ကို မိုင်းဆွဲ တိုက် အပါအဝင် နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးနှင့် တိုက်ခိုက်လျက်ရှိရာ အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နှင့် ဒေသခံကာကွယ်ရေးအဖွဲ့များ အကြား စစ်ရေးအခြေအနေမှာ တင်းမာနေလျက်ရှိနေသည်။
ထိုသို့တင်းမာမှုများရှိသော်လည်း စစ်ကိုင်းတိုင်း အချို့နေရာများတွင် ဒေသခံကာကွယ်ရေးအဖွဲ့များအနေဖြင့် နယ်မြေအရ အသာစီး ရယူနိုင်လျက်ရှိနေပြီး ပြည်သူလူထုကို အကာအကွယ်ပေးနိုင်သော နေရာများရှိလာပြီ ဖြစ်ကြောင်း ဒေသခံကာကွယ်ရေးအဖွဲ့များ၏ ပြောပြသည်။
#ကလေးမြို့အတွင်း #တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးများဆောင်ရွက်ရန် #ကလေးရဲတပ်ဖွဲ့စတင်ဖွဲ့စည်း #MPA
Kalay Police Force formed in Kalay for Law Enforcement within Kalay
For law enforcement activities within Kalay Township, Kalay Police Service was formed with CDM police, on December 6.
They are collaborating with Kalay people’s defense forces and the CDM police are teaching local youths about police procedures, local governance and law enforcement must be done with full responsibility and accountability, said an official of Kalay Police Service to MPA.
“It’s on effect from today on. We’re trying to begin accepting public complaints by the next two weeks. Right now, it is campaigning period”, he said.
Kalay Police Service is endeavoring to collaborate with local heads, influential persons for judiciary tasks as well.
It will be done with responsibility, accountability, freedom and transparency for the public, the police force says.
Last August also, the Karenni State Consultative Council (KSCC) formedapolice force.
Currently, despite clashes across the regions between the terrorist military and local defense forces, the local defense forces are gaining influence in the areas.
The local defense forces in Sagaing region are attacking the terrorist military with various methods including blast mine attacks and they are under intense military situation.
Despite those tensions, the local forces are gaining the upper hand of the areas and there are many places where they able to protect the people.
#WithinKalay #forLawEnforcement #KalayPoliceForceFormed #MPA
Previous: ရန်ကုန်ကြည့်မြင်တိုင် သပိတ် ကားနှင့်တိုက် ဖြိုခွဲခံရသဖြင့် အမျိုးသမီးငယ် ၂ ဦး သေဆုံးနိုင်ခြေရှိပြီး ၅ ဦးထက်မနည်း အဖမ်းခံရ
Next: အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကို ထောင်ဒဏ် ၄ နှစ်ချ